Myriam - Somali: Myriam
Ku soo dhawaada Myriam - Hayadda la talinta Dumarka Qaxootiga ah ee ku nool Kiel Jarmalka
Matahay Qof ay Dhibaato la soo deristay, oo aan garanaynin Meesha uu Gargaar u doonan lahaa?
Ma waxaat tahay Qof Dhibaato badan soo maray, oo weli Dhibaatadaas soo xasuusta? Marabtaa in aad Dhibaatadaada Dadka u shegato?
Ma waxaad tahay Qof ka baqaya in ay Dad dhib u gaystaan?
Wax Su´aal ah ma ka qabtaa Sharcigaaga aad ku joogto ama sida Waddanka Jarmalka Sharci looga qaato?
Anaga ayaa diyaar kuu ah, oo Talo Hiil iyo Hooba ah kuula garab joogna.
Waxaan nahay Rug loogu talo galay in ay Dumarka Qaxootiga ah ee ku Nool Kiel ama Jarmalka deggan, talo siiyaan. Waxaan Talo siinaa Dumarka Dhibaatada loo gaysto, ama loogu caga jugleeyo. Weliba waxaa Talo ka bixinaa Su´aalaha ku saabsan sida Waddanka Jarmalka Sharci looga qaato. Waxaa nala shaqeeya Qareen ama Abukaato Su´aalaha Noocaas ah talo kabixiya.
Talada aan bixino waa Lacag la´aan, oo Wax Lacag ah lagaama doonaayo!
Anaga haddaan Nahay Hayaddaas aan kuu soo sheegnay waxaa na kharashgareeyay Hayado kale sida Hayadda Deutsche Fernsehlotterie loo yaqaano iyo Kaniisadda Nordkirche loo yaqaano, Iyaga ayaanna hoos tagnaa.
Waxyaaba aan Dumarka Qaxootiga ah u hayno waxaa ka mid ah.
Dumarka waxaa ay sheegaan Wixii loo qabtay.
Halkaan ayaa waxaan idinku diyaarinay Jawaabo laga bixiyay Su´aalo ay Dadka Badankooda na waydiiyeen.
Xafiiska Gargaarka Dumarka ee Nordkirche
Xafiiska Gargaarka Dumarka ee Nordkirche loo yaqoo waa Xafiis abaabula Waxyaaba ay Dumarku u baahan yihiin , Xafiiskaa waxaa uu hoos tagaa Kaniisadda, “Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland” loo yaqaano Kaniisaddaas oo ka kooban Laamaha ku kala yaalla Gobolada Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Xafiiskaas waxaa uu soo abaabulaa oo uu isku xiraa Dumarka iyo Hawlahooda. Dumarka ayuu isku keenaa si ay u wada xiriiraan. Waxaa lagu dadaalaa in Dumarka ay Hawshoodo si ay Ayaga doonayaa u qabsadaan. Waxaa ay Dumarka Meesha isugu yimaada wada qabsadaa Hawlaha ay ka mid yihiin in ay Safa wada aadaan, Siminaar ayay wada qansadaan, Muxaadaro ayay wada qabsadaa. Maxaadarooyinkaas waa Kuwo ku lug leh Waxyaaba ay Dumarku tabnayaan. Xafiiskaa waxaa uu mar walba garabtaagan yihiin Dumarka Dantooda iyo Xuquuqdooda. Kaniisadda waxaa Dumarka wakiil ka ah Dumar Kaniisadda iyo Xuquuqda Dumarka yaqaana. Kaniisadda Dumarka caawiya waxaa ay leedhay Laamo kale oo Dumarka caawiya sida Mashruuca Myriam, Xafiiska Contra loo yaqaano, Rugta Talobixinta Cara*SH loo yaqaano, iyo Rugta GODE TIED loo yaqaano.
Cawinaadaas oo dhan baa diyaar laguula yahay ee nala soo xiriir.
Talooyin aan Dumarka Qaxootiga siino Taas oo Lacag la´aan ah, Dumarka Talada la siiyo waxaa ay noqon karaan Kuwo Sharci haysta ama Kuwo aan Sharci haysanin.
Luqadaha Talada lagu bixiyo
Shaqaalaha Hayadda u shaqeeya waxaa ay ku hadli karaan Luqadaha Jarmalka, Ingiriisiga, Carabiga iyo Tigrinya. Luqadaha kale waxaa raadinaa Turjubaan Dumar ah! oo kuu turjuma Talooyinka, Turjubaankaan waa aad aamini kartaa.
Talada aan bixino waa Talo Xur ah, waana Wax Anaga uun nagu eg. Cid Kale uma sheegno Waxyaabaha aad noo shegtid. ku khasbi mayno, Adiga ayaa Go´aanka iska leh. Sidoo kale waxaan ku dhaarsan nahay Hadalka aad noo sheegto in aan Cid Kale u sheegi karin. Sidoo kale Turjubaanadana waa sidaas! Si Sir ah ayaan Talooyinka kuu siinaynaa, Waxaad Adiga aad nagu dhihina samayn mayno.
Waa kuu imaan karnaa
Kiel Dumarka u baahan Taladeena, haddii aan noo imaan karin Anaga ayaa ugu tagi karna Meesha ay joogaan!
Waxaan la shaqaynaa Hayadaha kale ee bixiya Talooyinka Noocaas ah. Haddii aan garano Talada aad u baahantahay, Tahay Mid Hayad Kale si fiican u bixin karta, Hayaddaas ayaan kugu wareejinaynaa. Waana ku garab galaynaa haddii aad sidaas doonaysid.
Talooyinka ku saabsan Sharciga
Talooyinka aan bixino ee Sharciga ku saabsan waxaan ugu talogalnay Dumarka Qaxootiga ah oo keliya. Waxayna Talooyinka ka kooban yihiin:
Waraaqaha laguu soo diro
iyo Waxyaabo akale oo Dumarka u khaas ah.
Haddii aad Taladeena u baahan tahay noo sii sheeg haddii aad Turjubaan u baahan tahay. Fadlan Waraaqahaaga oo dhan horay u soo qaado. Ballan nala yeelo.
Waxyaabaha aan kuu haynin
Guri ma kuu raadin karno. Dumarka aan weli noo qornayn uma raaci karno Xafiisyada ay Dani kaga xiran tahay, sida Jobcenterka/Dhakhtar/Xafiiska Ceerta. Loyarna kuuma noqon karno.
Waxaan kaloo idiin siinaynaa
Adiga ama Idinkoo Koox ah oo wada socda ayaad noo imaan kartaan
oo aad ka wada hadli karnaa Habka Sharci loo qaato
Su´aal kasta oo ku saabsan Habka Sharciyda loo bixiyo ayaan Jawaab kaa siinaynaa.
sidoo kale waxaan kuu sheegaynaa Xuquuda Khaaska ee ay Dumarka Kiel degan lee yihiin.
Markaa waxaa kugu guubaabinaynaa in aad nala hadasho!
Sara, 36 Jir, oo Ciraaq ka imaatay waxay tiri
Waxaan ahay Naag Ciraaqi ah oo 36 Jir ah, waxaan ka soo baxay Jaamacad, waxaan go´aansaday in aan Sheekadayda idiin sheego. Waa Sheeko aad u naxdin badan, oo aanan sinnaba u doonaynin in ay Naak Kale Shekadaas oo kale ku dhacdo, maxaayeelay waxaa igu dhacay Cadaab Badan oo u sabab ahaan Caadada iyo Dhaqanka Tolkayga.
Sheekadaan waxaa ay bilaabatay Anigoo weli aad u yar, Waqtigaas oo ahaa Mid aad u dhib badnaa. Waxaa ila dhalatay Todoba Waalal oo Wiilaal ah, Kuwaas oo Nolosheeyda oo dhan Gacanta ku haayay. Markaan xoogaa soo waynaaday, oo aan Dhoocil noqday, Cadaabkii ayaa igu sii saa´iday, oo Walaalahayga waxaa ay bilaabeen in ay i sii cadaadiyaan, si xun ayay bilaabeen in ay ila dhaqmaan, waana ay i dili jireen. Dhibaato Jir Dil ah oo aad u badan ayay igu samayn jireen.
Markaa 20 jirsaday- waa Waqtiga Hamiga badan la leeyahay, waana Waqta Noloshaada ugu Quruxda badan, waa Waqtgia Noloshaada iyo Mustaqbalkaaga lagu hami waynaado; waa Waqtiga Shukaansiga la bilaabo, oo la damco in aad hesho Ninka aad jeceshahay, laakiin Aniga Riyooyinkaas oo dhan iima suurto galin. Noloshayda oo dhan waxaa laga dhigay Naar oo kale, oo aan ku hamiyay in aan Naartaas ka baxo. Waxay igu qasbeen in aan guursado Nin aannu Ilmo Adeer nahay, oo aanan doonaynin, Weliba Ninkaas ay igu qasbeen waxaa uu qabay Naag Kale oo Sideed Caruur u haysa. Waxaa uu ahaa Nin aan Weligiis Iskuul dhiganin, si xun Dadka ula dhaqma, islamarkaasna waxaa uu ahaa Nin ay Aabahayga isku da´ yihiin. Waxaan u dhalay Laba Gabdhood, Nolosjaas Cadaabka ah ayaan Meeshii ku sii jiray. Waxaan u dulqaadan waayay Sida Xun ee uu igula dhaqmo, iyo Ra´yigiisa qalafsan ee u sababa ah Aqoon la´aanta haysatay baa aad igu adkaatay in aan ku sii jiro.
Dhibaatada aan Ninkaas ku qabay, Qof qiyaasi karo ma jiro. Markii aan Mar Seddaxaad Uur u yeeshay, oo uu ogaaday Waxa aan Uurka ku sido haddanay yahay Gabar, ayaa waxaa uu damcay in uu Uurka igu dilo, waxaa uu sameeyay in uu Caloosha iga garaaco si uu Canuga u soo dhaco. Waayo Wiil ayaan rabaa ayuu dhahay. Markaas baa waxaa uu igu qasbay in aan Uurka iska soo rido.
Wixii Maalintaas ka danbeeyay waxaan go´aansaday in aan Mar Danbe u sabri doonin, waxaan go´aansaday in aan ka tago. Waan ka cararay. Aniga iyo Labadayda Gabdhood waxaan aadnay Meel fog. Aniga sinaba uma rabin in Gabdhahaygana Sidayda oo kale noqdaan. Afa Sano ayaan ka dhuumanaynay. Afartaas Sano Xurnimo ayaan dareemay. Laakiin Nasiibxumo waxaa noqotay in uu Aniga iyo Gabdhahaygaba na soo helo. Markii uu isku dayay in uu Xoog nagu wato oo Aniga iyo Gabdhahaygana Taas ka diidnay ayaa waxaa uu dilay Gabadhayda 8 Jirka ahayd.
Markaas baa waxaa igu dhacay Niyadjab, Duco iyo Alla Bari oo keliya ayaan haystay. Markii Danbi ayaa la xiray Anigana layga furay.
Markii danbe waxaan go´aansaday in aan Waddanka isaga tago, waayo Niyadjabka igu dhacay dartiis ayaa waxaan ku fekeri jiray in aan is dilo. Nasiib wanaag Jarmalka ayaan soo gaaray oo aan Megengelyo ka dalbaday. Markii aan Waddankaan ku negaaday ayaa waxaan dareemay Nolol fiican in xurnimo. Si aan u soo caafimaado Maskaxdana iigu degto waxaa la i siiyaa Caawinaad, oo waxaan ku xiranahay Meesha Kiel ku taalla ee ZIP-Zentrum für Integrative Psychiatrie loo yaqaano, waxay i siisaa Talooyin fiican.
Mar Danbe waxaan u imid Hayaddaan Myriam loo yaqaano, aad bayna ii caawiyeen, Hawlahayga oo dhan bay iga caawiyeen.
Noloshayda waxaa sii wanaajijay Nin aan isku baranay Meesha Afka Jarmalka lagu barto, markaas baa inta aan is guursanay ayaa waxaan dhalnay Canug. Gabadhayda waxaa u dhashay Walaal. aad ayaan u farax sanahay. Gabdhaday Walaasheeda aad ayay u jeceshahay waana ay la ciyaartaa.
Aad ayaan ugu faraxsanahay Isbedlka Fiican ee Noloshayda ku yimid, oo waxaan yeeshay Reer Cusub. Reerkayga Cusub aad ayay ii caawiyaan, waxaa ay i siiyaay Karti badan. Reerkayga aad ayay ii jecel yihiin, Taasina waxaa ay ii tahay Fursad Fiican oo aan Noloshayda Cusub ku maarayn karao. Mar marka qaar waa ay wanaagsan tahay in Waayo arag la noqdo, Samir iyo Dulqaad ayaa lagu moodaa.
Kamadanbayntii Waxaan u mahad celinayaa Dowladda Jarmalka oo i siisay Fursaddan Qaaliga ah. Runtii waa Fursad Qaali ah, oo aan la heli karin, waayo hadda waxaan ku noolahay Sharaf iyo Xurnimo. Waa u jedaa in ay ku dadaalayaan in ay i ilowsiiyaan Dhibkii aan soo maray, oo ay ii suurto geliyaan in aan noqdo Hooyo Reer Cusub yeelatay.
Maxaad Dumarka kale kula talin lahayd?
Waxaan u malaynayaa, horta Naag kasta Dhib u khaas ah bay leedahay, laakiin waxaan hubaa haddii la dulqaato, Allena la aamino, lana dadaalo, in Guul la gaari doono, oo Naagaha oo dhan waxaa ay ku noolaan karaan Nolosha ay rabaan.
Semhar, 23 Jir, oo Eritrea ka imaatay
Waxaan jiray 19 Sano, markii aan go´aansaday in aan Waddankayga Hooyo ee Eritrea ka soo dhoofo, si aan markaas u helo Nolol fiican ayaana Taas igu kaliftay. Waayo Waddankayga waxaa ka taliya Nin Kaligii Taliye ah, oo aan Shacabka u naxriisan.
Safarkayga waxaa uu ku bilawday markii aan Itoobiya soo aaday, Halkaas ayaa waxaan ku noolaa Xero Qaxooti oo aan Mudo Hal Sano ah ku jiray. Markaas baa waxaa i soo qaaday Nin Makhalis ah, oo i keenay Sudaan ka dibna waxaa uu i keenay Waddanka Liibiya. Haddana waxaa ay igu qaadatay Mudo Saddex Bilood ah, ilaa aan ka imaanayo Waddanka Talyaaniga. Markii Danbe Talyaaniga waa aan ka soo baxay, waxaan soo raacay Tareen oo aan ku aaday Waddanka Swiden. Swiden Wax Yar ayaa waxaan ku jiray Xero Qaxooti. Markii Danbe waxaan soo aaday Waddanka Jarmalka oo aan markii horeba rabay in aan ku noolaado.
Mudadaas Labada Sano ah ee aan soo socday waxaan la kulmay Dhibaato aad u faro badan, oo ay ka mid yihiin Gaajo iyo Oon badan; waxaan arkay Dad Gaajo iyo Oon dartiis la dhintay, waxaan la kulmay Kufsi iyo Fara Xumo kale. Dumar Uur iska soo ridaaya ayaan arkay.
Markaan imaaday Waddanka Jarmalka waxaan go´aansaday in aa Jarmal joogo. waayo Jarmalka waxaa ii jooga Nin aan Ilo Adeer nahay. Laakiin Swiden baa waxaa iga yaalla Faro, oo markii aan Meesha soo maraayay baa waxaan dalbaday Megengelyo. Markaas Jarmal baa waxaa uu igu dhahay Wax Xaq ah naguma lihid waxayna igu dheheen waxaan kugu celinaynaa Waddanka Swiden.
Markii ay Arintaas i qabsatay baa waxaan la hadlay Xafiiska Xerada aan joogay, markaas baa waxaa ay igu soo xiriiriyaan Hayaddan Samafalka ah ee Myriam loo yaqaano, waxaa ay ii sheegeen in ay Hayadda bixiso Talooyin Fiican oo ay siiso Dumarka Qaxootiga ah ee dhiban. Markaas baa waxaa ay iga caawiyeen in aan helo Kaniisad i siisa Megengelyo. Kaniisaddii baa waxaa ay i siisay Caawinaad iyo Guri aan ku dhuunto, ilaa ay ka dhamaatay Mudada la ii qabtay in aan Waddanka uga baxo ayaan Meeshaas ku dhuumanaayay. Markii Danbe Jarmal ayaa qaabilay Arimahayga Megengelyo. Marii aan Muddo Laba Bilood ah Kaniisadda ku dhuumanaayay ayaa waxaa markii danbe la ii ogolaaday in aan Xerada Qaxootiga ku soo laaban karo, markaas baa Meeshii ka sii watay Dalabkayga. Markii Danbe waxaan helay Guri aan ku noolaado. Hadda Gurigaas ayaan ku noolahay oo aan ku faraxsanay.
Waxaa la ii sameeyay Daawayn oo laygu dejinaayay, oo waxaa Wax badan ku xirnaa Cisbitaalka ZIP- Zentrum für Integrative Psychiatrie, loo yaqaano ee Kiel ku yaalla, halkaas ayaa aad laygu caawiyey, hadda waa aan caafimaad qabaa. Noloshayda ayaan ku raaxaysaa.
Afka Jarmalka Barashadiisa waxaan ka gaaray Heer fiican oo waxaan qaatay Shahaadada B1 loo yaqaano, kadibna waxaan helay Shaqo, hadda Aniga ayaa is maamula Wax Ceer ah ma qaato. Hadda waa aan nabadqabaa, waxaa la i siiyay markii aan Waraysiga maray Hal Sano oo Deganaasho ah, hadda Jarmalka waa aan ku noolaan karaa.
Aad ayaa waxaan ugu rajo waynnahay in aan Mustaqbal fiican yeesho. waxaan ku dadaalayaa in aan Afka Jarmalka si fiican u barto. Sidoo kale waxaan rajaynaaya in aa Waxbarshada Heer Jaamacad ka gaaro, oo aan markaas Sahqo fiican helo.
Waxaan lee yahay Dumarka akhrista Sheekadaydaan: Dhibaato kasta oo Noloshaada la soo deristo, waxaan idin lee yahay Dulqaad ayaa Dhibka looga baxaa, weligiina ha is dhiibina, haddaad turunturooto, dib u istaag, Noloshaada Meesheeda ka sii wad. Fursad Kasta oo ku soo marto ka faa´idaysto. Ha rajo dhigin oo ku dadaal in aad guulaysato. Waayo kamadanbayntii Adiga ayaa guulaysan doona markaas baad helaysaa Waxa aad rabtay.
Yasmin oo Ciraaq ka imaatay
Waxaan ahay Haweenay Kurdi-Ciraaqi ah, waxaan Muddo Labo Sano ah degganahay Waddanka Jarmaka. Markaan Ciraaq joogay ayaan Nin guursaday, Wax Yar kadib Ninkayga waxaa uu soo aaday Waddanka Jarmalka. Wax Yar Kadib ayan ka soo daba imid, waxaan soo maray Waddanka Türkiga, waxaana is oo waday Dad Mukhalisiin ah.
Waxaan aad uga xumahay in aan isku dhacnay Aniga iyo Ninkayga, oo markii horeba ahaa Xiriir aan sidaas u sii fiicnayn. Markii aan Ciraaq joognay xitaa waxaa iigu cagajuglayn jiray in uu Nafta iga gooyn doono. Markaan Jarmal imaanay waxaan aad ugu rajo waynaa in uu is bedeli doono, laakiin taas ma dhicin, oo weli waxaa uu igu haayay Cadaabtii uu Markii horayba igu hayn jiray. Waxaan Wax Badan isku dayay in aan u sabro, oo waxaan isku dayay in aan Waqti Dheeraad ah siiyo, laakiin waxaan u malaynayaa in uu Ninkaygu yahay Nin Xanuunsan oo Maskaxda wax ka dhiman yihiin. Waxaa uu Mar Walba igu eedeeyn jiray in aan Nin Kale Hoosta ka wato, markaas baa waxaa uu doonay in uu Mar Walba i kontroolo. Waxaa uu ii diiday in aan Dad Kale barto, markaas baa waxaa uu isku dayay in uu xitaa Lacagta ii diido Lacgtaydana igu kontroolo. Qolka aan degganayn ayuu igu xiri jiray, markaas aan Waqti Badan u xirnaan jiray Anigoo Cidnna ila joogin. Markaas baa waxaan go´aansaday in aan Ninkayga ka tago. Naag aan is naqaanay baa waxaa ay ii sheegtay Mashruuca Myriam. Markaas baa waxaa ay i siiyeen Talo fiican oo waxaa ay i dheheen Guriga Dumarka lagu dhaqaaleeyo aad. Sidii ayaan yeelay.
Mashruuca Myrian waxaa kaloo ay iga caawiyeen, Habkii aan ku heli lahaa Sharci aan ku joogo, markaas baa Muddo Lix Bilood Gudahooda ah, waxaa la i siiyay Sharci aan Waddanka ku joogo. Bilo kadib waxaa ii suurta gashaan ka tago Guriga Dumarka, oo waxaan helay Guri aan Aniga ijaartay. Daas ayaan ugu farxay waayo waxaan dareemay xurnimo iyo Degganaasho. Hadda waxaan ku talo jiraan in aan Afka Jarmalka barto, oo markaas ay ii suurto gasho in aan dhexgalo Bulshada Jarmalka ayaan ku hawl jiraa, oo markaas aan ku guulaysto in aan Nolol Wanaagsan ku noolaado.
Waxaan Dumar Kasta ku dhihi laa, Weligaa ha cabsanin, ha cagataalaynin, oo Mar Walba raadso Cid Talo ku siisa, kuna caawisa, Dhibkaaga ha qarsanin.
Muna oo Soomaaliya ka imaatay
Waxaan ahay Gabar Soomaali ah, oo dhibaato iyo Xanuun Badan soo martay. Dhibaatadaas faraha badan leh waa Mid aan la ilaawi karin, waxaana ay Raad ku yeesheen Naftayda iyo Noloshayda. Waa Dhibaat aan Halkaan ku soo wada koobi karin. Waxaanse isku dayayaa in aan Waxooga Wax ka dhaho Dhabaatooyinkaas. Markaas 12 Sano jirsaday, Naag baa i af duubtay.
Waxaa ay i gaysay Waddanka Sacuudi Carabiya markaas baa waxaa igu wareejisay Reer Sacuudi ah. Maalintaa s ayay Dhibaatadayda bilaabatay, waxaan Reerkii u noqday Shaqaali Cidda oo dhan u shaqaysa. Waa ay igu qaylin jireen, markaas, i xiri jireen. Sanado badan ayaa waxaa igu haayeen si Biniaadinimada ka baxsan.
Waxaan Dhawr Jeer isku dayay in aan ka baxsado, laakiin Taasi iima suurto galin. Mar Kasta oo aan isku dayo in aan baxsado waxaa ay i sii gelin jireen Cadaab dheeraad ah. Sidaas ayaa ku jiray ilaa ay Maalin Maalmaha ka mid ah Naagtii Ciddaas Hooyada u ahayd Shil Gaari gashay. Dhaawac Xun ayaa soo gaaray, Gacmaha ayay ka jabtay, Madaxana Jug ayaa ka gaaratay, markaas baa waxaa ay noqotay Qof Curyaan ah. Waxaa ku dhacay in ay Kaligeeda is maamuli karin, waxaa ay Mar Walba u baahatay in Mar Walba lala joogo, oo la caawiyo.
Maalim Maalmaha ka kid ah waxaa dhacday in ay Reerkii aadaan Safar, markaas baa waxaa ay igu dhaafaan Naagtii. Markaas baan waxaan helay Fursad aan ku baxsad, waxay ahayd Maalintii Noloshayda iigu farxad badnayd. Markii Danbe waxaan ku guulaystay in aad Yurub u soo qaxo, markii danbe waxaan imid Jarmalka oo aan hadda ku noolahay. Hadda waxaan haystaa Xurnimo fiican. Waxaan Fursad u yeeshhay in aan Nolol Farxad leh ku noolaado. Waxaan aad ugu madcilinayaa Cid Kasta oo i caawisay weliba Dowladda Jarmalka ayaam u mahad celinayaa.
Waxaan Dumarka hadda imaanaya lee yahay Karti yeesha oo waxaad mar walba raadsataan Cid idiin caawisa. Weligaa ha niyad jabin.
Layla, 25 Jir oo Suuriya ka imaatay
magacayga waa Layla, waxaan jiraa 25 Sano, waxaan ka imid Waddanka Suuriya. Aniga iyo Waalidkayga oo wada socona ayaan Jarmalka imaanay. Sharci ayaa nala siiyay, markaasaan waxaan mooday in ay Wax Walba ii hagaageen, ilaa ay markii danbe Arin soo deristay. Waalidkayga ayaa waxaa uu i siiyay Nin, Nin aanan aqoonin ayay rabeen in ay igu daraa. Markaas baa waxaan Walaalahayga ku dhahay in aan Ninkaas laygu dari rabo guursanaynin, Nin aanan aqoonin marabo ayaan ku dhahay, laakiin waa ay iga diideen, waxaana ay bilaabinn in ay cadaadiyaan.
Aniga Nin Kale oo aan u jeclaa ayaan bartay, waxaan jeclaystay in aan Ninkaas la noolaado, laakiin waxaan ku dhiiran waayay in aan Damacayga sheegto, oo aan Familkayga u sheego ayaan yeeli waayay.
Dhaqankeena ayaa noo diidaya in aan sheegano waxa aan doonayno, oo kama hor imaan karno waxa ay Waalidkeena rabaan. Markaa waxaa aad iigu cuslaatay in aan diido Ninkaas ay igu qasbaayeen.
Laakiin Markii Danbe Aniga iyo Wiilka aan jeclaa baa waxaa raadsanay Cid na caawisa, oo waxaaan markii Danbe helnay Taleefoonka ay dirsadaan Dumarka dhibka qaba ee HILFETELEFON loo yaqaano, markaas baa waxaa ay noo sheegeen in uu Mashruuc Myriam la yiraahdo jiro, waa Hayad la talisa Dumarka Qaxootiga ah bay nagu dheheen.
Myriam baa waxaa ay noo sheegeen in aan Waddanka Jarmalka Cidna khasab lagu guursan karin, Qof kasta waxaa uu Xaq u lee yahay in uu Isaga ama Iyada si xur ah u doorato Qof ay guursan lahayd. Sidaas ayaa waxaa noogu suurto gashay in ay Myriam Mar Walba Talooyin fiican na siiyaa. Sidoo kale waxaan la tashanay Nin Wadaad ah oo Masaajid Imaam ka ah, oo waxaan ka cudsanay in uu Maharka noo sameeyo. Xitaa Isaga waxaa uu noo sheegay in aan Diinta ogolayn in Dad aan is rabin si xoog ah laysku guuriyo.
Dhibaatadii ka dhex socotay Angiga iyo Waalidkayga ayaa ka sii dartay. Waayo waxaa ay diidanaayeen in ay iska kay daayaan oo aan Ninkaan rabo guursado. Laakiin Aniga iyo Saaxiibkayga waa aan is guursanay, Markii uu Cadaadsika nagu badsheena waxaan u guurnay Magaalo kale. Meeshii ayaan Nolosheena ka sii wadanay.
Hadda waxaan noqday Qof Xaas yeeshay oo Ninkay rabtay guursatay. Dhibaato kastaba ha iigu qaadateen waxaan raacay wixii ay Nafsadayda rabtay. Hadda Uur ayaan lee yahay waxaan Mar Dhow sugaynaa Curutkeena.
Waxaan rabaa in aan Dumarkoo dhan ku dhaho: Xaqqa aad leedihiin garta, Noloshiina Idinka ayaa go´aansan kara, Cabsi iyo in aad Dhaqanaka Qalafsan dartiisa ha u dayicina xaqqiina.
Laakiin la soco Jawaabahaan waxaa sinaba loogu qaadan karin in ay gali karaan Booska Talobixinta haddii aad Adiga Naftaada noo imaan lahayd! Waayo Qof Walba Xaaladdiisa waa u gooni, Isbedel yar ayaana Wax Kasta ku halaabi kara. Sidaa darteed waxaan ku leenahay Adiga Naftaada noo imaaw haddii aad Talo rabtid.
1. Canug Halkaan ku dhashay Jarmal miyuu horay ka noqonayaa?
Jawaabta waa Maya, Haddii laakiin Canuga Waaliidkiisa uu Mid yahay Qof Jarmal ah, Canugana waa Jarmal. Haddii Waalidka Canuga ay Mudo 8 Sano ah Waddanka deggan yihiin, oo markaas Canug Jarmalka uga dhasho, Canuga waxaa uu qaadanayaa Jinsiyadda Jarmalka. Haddii aad Canug Waddanka ku dhex dhasho, waa laga yaabaa in aad Canuga Dartiis Sharci ku qaadato. Haddii aad Su´aalo Noocaas ah qabtid, waa aad noo imaan kartaa, waxaa diyaar kuu ah Dad Sharciga aad u kala yaqaana. (Taleefoonka soo dirso)
2. Weli Sharci maqaadanin , waxaan doonayaa in aa Ninkayga iska furo Kahor inta aanan Sharci qaadanin, markaa waxaan rabaa in aan ogaado haddii aan Aniga kaligayga iyo (Caruurtayda) Sharci dalban karnp?
Horta in aad Mar Labaad is dhiibto uma baahnid, Waxa kiliya aad u baahantahay waa (Adiga iyo Caruurtaadaba), in aad Dalabkaaga Midka Ninkaaga ka reebtid. Markaa ka bacdi Waraysigaaga ayaa si gooni ah lagaaga qaadayaa, waa haddiii aadan weli Wareeysi marin. Markaa ka bacdi (Adiga iyo Caruurtaadaba) waxaa la idiin soo diraa Jawaabtiina. Haddii aad Su´aalo Dheeraad ah, oo ku saabsan sidii aad Ninkaaga isaga reebi lahayd, waa aad noo imaan kartaa, Anaga ayaa diyaar kuu ah, ee na soo booqo. (Taleefoonka soo dirso)
Haddii laakiin aad Waraysiga martay, oo aad Adiga iyo Ninkaaga Hal Mar wada marteen, laakiin aaweli Wax Jawaab ah, helin, waxaad Xaq u leedahay in aad Mar Labaad codsatid in ay Waraysi Dheeraad ah kaa qaadaan.
3. Waxaa i keenay Ninkayga, haddana waa aan is dagaalnay, waxaan rabay in aan kala tagno, markaa waxaa rabay in aan ogaado Sharci ma la i siinayaa haddii aan Ninkayga ka tago?
Arintaan Dhawr si ayaa loo xallin karaa. Waxaa aad loo eegayaa Xaaladda aad ku sugan tahay. Waxaa fiican in aad noo imaato, si aan Su´aalaha Noocaan ah si fiican kuugu sheegno. (Taleefonka soo dir)
4. Sedee baa Waraysiga loo maraa, ama Waraysiga Dadka Megengelyodoonka ah laga qaado loo maraa?
Videoga hoos fiiei, halkaas ayaa waxaan kuugu diyaarinay habka Interveowga ama Waraysiga loo maro iyo Xuquuqda aad leedahay, haddii aad rabto waa aad noo imaan kartaa! (Taleefoonka soo dir)
5. In aan Ninkayga iska furo ayaan rabaa. Maxaan sameeyaa?
Jarmal Qof Kasta Dumar iyo Ragba waxaa ay Xaq u leeyihiin in ay Furiinka ay doonayaan ku dhaqaanaa, Naagta Ninkeeda waa ay iska furi kartaa Iyadoo aan Cid Kale Ogolaasho weeydiinin. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad Qareen ama Looyar Sharciyada Dadka is qaba yaaqaana o tagto. Waxaad Looyarka u sheegtaa sidii aad isku guursateen, ma Wadaad baa iskukiin mehriyey mise si sharci ah ayaad isku qabtaa. Markaa Looyarka ayaa Xuquuqdaada oo dhan kuu sheegaya iyo sidii aad Ninkaaga isaga furi lahayd.
6. Xuquuqda aan lee yahay waa kuwee, marka aan Ninkayga iska furo, weliba Xuquuqda Caruurtayda?
Horta Caruurta aad iska dhasheen isku si ayaad Xaq u leedihiin. Jarmalka waxaa ka jira Qareemo ama Looyaro Arimahaan oo kale ku takhasusay, Iyaga ayaa kuu sheegaya Xaqqa aad leedahay weliba Kuwa Caruurtaada, marka aad Adiga iyo Ninkaaga kala tagtaan. Markaa Haddii Dhib Noocaas ah kugu dhaco Talo raadso.
7. Dalabkayga Megengelyo, waa la ii diiday. Maxaan sameeyaa?
Haddii ay Diidmo kuu imaato, isla markiiba u tag Hayadaha Dadka Qaxootiga ah, caawiya, oo Meeshaas Talo u raadso, sidoo kale waa in aad Looyar ama Qareen Arimaha Qaxootiga aad u yaqaana qabsataa. Taasi waa muhiim, waayo, Waqti Go´an ayaad haysataa, oo aad Diidmada kaga dacwoon kartid. Waxaad ogaataa Waqtiga aad haysato kama badna (Hal ilaa Laba Todobaad), waxaana Waqtiga uu kuu bilaabmayaa Marka ay Diidmada ku soo gaarto. sida ugu deg degta badan Talo u raadso, haddii kale Waqtiga ayaa kaa dhacaya, Qareenada iyo Cidda kale ee Tala ku siinaysa ayaa kuu sheegi doona Fursadda aad haaysato, ee (Taleefoonka soo dir)
Waxaad yeesha, Waqtiga laguu qabtay yuu kaa dhicin, haddii aadan Qareen helin, Adiga kaligaa ayaa Dacwadaada Maxkamadda u dirsan kartaa, markaas ka bacdi ayaad Qareen raadsan kartaa, ee Anaga noo imaaw Anaga ayaa ku garab galeeynaa.
Haddii Sharci Halsano ah lagu siiyo (waa Sharciga Yar ee Biniaadannimada ah), Go´aankaas Naftiisa waa aad ka doodi kartaa, oo waxaad Xaq u leedahay in aan Maxkamadda Dacwo u gudbisatid. Hana ka baqin in ay Halka Sano kaa ceshadaan. Haddi Sharci Halka Sano ka fiican lagu siin doono iyo haddii kale waxaad weeydiin kartaa Qareenkaaga, ama Hayaddaha Qaxootiga la taliya, Isaga ayaa kuu sheegayaa haddii aad Fursad haaysato.
8. Markii lay waraysanaayay Wax Kasta ma sheegin. Hadda maxaan sameeyaa?
Haddii aan weli Wax Jawaab ah kuu soo dhicin, Wixii aad Waraysiga ka ilowday waa aad ku darsan kartaa, si Qoraal ah ayaa u dirsan kartaa, ama Adiga ayaa inta aad u tagto Waraysi labaat ku sheegi kartaa. Laakiin in ay Mar Labaad ku waraystaan Ayaga ayaa Go´aanka iska leh. Markaas Haddii Waraysigaaga Wax ka kala dhiman yihiin, waxaa haboon in aan Qareen qabsato, aad u sheegto Waxa Waraysigaaga ka dhiman.
Haddii laakiin Jawaabta ay kuu imaato, Wax Waraysigaaga laga bedeli karo ma jirto, oo kaa yeelimaayaan in ay kaa dhaqaystaan Waxa Waraysigaaga ka ilowday. Haddii laakiin aad doonaysid in aad Go´aanka ka dacwootid, Taasi waa aad yeeli kartaa ee Qareenkaga la tasho, Isaga ayaa waxaa uu kuu sheegayaa Wixii Dan kuu ah.
9. Waxaa la i siiyay Sharciga kumeelgaarka ah. Laakiin Weli waxaa iga maqan Caruurtayda, Sharcigaas Caruurtayda ma ku keensan karaa?
Hadda Caruurtaada waxaad ku keensan kartaa, marka Sharciga Wayn lagu siiyo, (waa haddii Sharci Saddex Sano ah lagu siiyo).
Laakiin wixii ka danbeeyay 01. August 2018 waxaa la ogolaaday in Dadka Sharciga Biniaadannimada ah ee Halka Sano ah haysta Caruurtooda keensan karaan, laakiin waa in uu Qof ka Dalab qortaa waana Bishiiba Dadka Noocaas ah Dadka loo keenaayo waa in aanan 1000 Qof ka badanin. Markaa haddii aad tahay Qof Halsno Sharci ah haysta Caruurna kaa maqan yihiin, Talo raadso, Waxaad Talo ka heli kartaa Internetka Hayadda qaabilsan Dadka Qaxootiga ah.
Horta Familikaaga waxaa laga wadaa Caruurta aad dhashay, ee aan weli qaangaarin iyo Xaaskaaga (Ninkaaga/Naagtaada). Ayaga keliya ayaa laguu ogol yahay in laguu keeno. Haddii Adiga Naftaada Tahay Qof weli aan 18 Sano gaarin, waxaad XAq u leedahay in aad Hooyadaada iyo Aabahaaga u dacwootid, oo aad dhahdidi Hooyo iyo Aabo Jarnalka ha la ii keeno. Caruurta 18 Sano gaaray, iyo Qaraabada kale uma dacwoon kartid. Haddii aad Su´aal dheeraad ah qabto Qareenkaaga waydiiso, ama Anaga noo imaw.
Marka uu Sharciga kuu soo dhaco kadib waxaad haysataa Muddo Saddex Bilood ah, oo aad Dadkaaga ugu dacwoon kartid, markaa waxaa lagaa doonayaa in aad Mudaas Saddexda Bilood ah Gudahooda Dalabkaaga aad Dadkaaga ku keensan rabtid, u dhiibo Safaaradda Jarmalka ee kuugu dhow, ama Xafiisaka Dadka Qaxootiga ah qaabilsan Dalabkaaga u dhiibo. Haddii Waqtigaas laguu qabtay kaa dhaco waxaa Dhibaato ka imaan karta in Dadkaaga laguu soo qaado, waayo waxaa ay xujo ka dhigan karaan Waqtigii laguu qabtay waa aad ka dib dhacday. Kollay Kor iyo Hoosba Qareenkaaga la tasho.
10. Waalidkayga iyo Qaraabadayda waxay rabaan in ay Nin aan Aniga rabin igu daraan. Maxaan sameeyaa?
Jarmalka waxaa ka reeban in Cid Aroos lagu qasbo, Qof aadan jecleen laguuguma dari karo. Waxaad Xaq u leedahay in aad guursato, iyo in aadan guurasnin intaba waa ay kuu banaan tahay, sidoo kale waxaad Xaq u leedahay in aad guursato Qofka aad jeceshahay, ee waxaa kugula talinaynaa Dhiblaaga u sheego Cidda aad ku qanacsan tahay, oo aad is leedahay waa ay ku caawinayaa (Tusaale ahaan Macallinkaaga Iskuulka Xaaladdaada la socodsii, Qofka Xerada aad deggan tahay Masuulka ka ah ama Cid Kasta oo Dowladda u shaqaysa u sheeg Dhibkaaga), Anaga Nafteena waa aan ku caawin karnaa haddaad nagu aamintid Dhibkaaga, si Qarsoodi ah ayaa kuu caanwin karnaa. Haddii Kale Booliska u tag oo ka codso in ay ku badbaadiyaa. Booliska waxaa uu ku gayn karaa Guryaha ay ku cararaan Dumarka Dhibban. Guryahaas Dumarka lagu caawiyo waxaa deggan Dumar Adiga oo kale ah oo u baahan in la caawiyo. Guryaha Noocaas ah waa Guryo Qarsoon oo aan Cinwaankooda la garanaynin.
11. Ninkayga waa uu i dilaa/ waa uu i kontroolaa/ Guriga ayuu igu xiraa/ Lacagta aan haysto waa uu iga qaataa/ waxaa uu ii diidaa in aan Ciddayda ama Saaxiibadayda la kulmo/ aad ayaan u dhib qabaa, ha lay caawiyo.
Haddii aad Cabsi wayn ka qabto Ninkaaga, Waxaad aadi kartaa Guryaha lagu dhawro Dumarka. Guryaha Dumarka lagu badbaadiyo waxaa loogu talo galay Dumarka dhibka qaba, Iyaga iyo Caruurtoodaba Meesha ayay ku carari karaan. Guryaha Noocaas ah waxaa jooga Dad ku caawin kara, oo Su´aal kasta oo aad qabto Jawaab kaa siin kara. Cinwaanka Guryaha Dumarka ku carara waa Guryo qarsoon. In aad Gurigaas ku cararto waa Wax Adiga kugu xiran, haddii aad rabto oo keliya ayaad meeshaas aadaysaa. Markaad doontana waa aad iska tagi karaa. Haddii aadan weli si fiican Furiin uga fekerin, waxaad yeeli kartaa in aad Talo raadsato. Anaga xitaa diyaar ayaan kuu nahay, Talo ayaan si qarsoodi ah kuu siin karnaa.
Markaad na soo wacdo, waxaad Taleefoonkeena ku hadli kartaa Afkaaga Hooyo Mashiinta ku duub, Anaga ayaa markaas Turjubaan raadsaan doona, Shaqaalaha nala shaqeeya waxaa ay ku hadlaan Afafka Jarmalka, Ingiriisiga, Carabiga iyo Tigree, Afafka kale waxaan kuu raadinaynaa Turjubaan.
Haddii aadan ku qanacsanayn Turjubaanka aam kuu qabanay, inoo sheeg, Anaga ayaa kuu raadinaynaa Turjubaan kale. Fadlan Xafiiskeena Adigoo aan Ballan haysanin ha iska imaanin, waayo Anaga Xafiisa Mar Walba ma joogno.Waxaa nalaga helaa.
Taleefoon: +49 431 / 55 77 91 93